Fidiyaha Koonteenarka Korontada, Mashiinka Mashiinka Xakamaynta, Hopper Harbor - GBM
Waxaan nahay GBM.Waxaan naqshadeynnaa, soo -saareynaa oo adeegnaa qalabka dekadda iyo qalabka qaadista caadooyinka ee raridda & dejinta. Waxaan bixinaa xirmada oo dhan sida aad u baahan tahay.
Qaboojiyaha diirka liinta ee korontada ku shaqeeya ee korontada ku shaqeeya ee GBM ayaa inta badan loo adeegsadaa qabsashada xamuulka culus ee culus (sida birta doofaarka iyo birta duugga ah ee culus). Waxaa aad loogu isticmaalay dekadaha, biraha birta, iyo waqtiyo kale.
Hopper -ka ay naqshadeysay shirkadeena waxaa inta badan loo adeegsadaa soo -dejinta iyo soo -dejinta dhagaxa dhuxusha, boodhka sibidhka iyo budada birta, waxaana loo qaabayn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.
Crane & fidiye fidiya
Wiishka sagxadda iyo fidiyaha wareejinta awoodda waxaa soo saaray injineeradeena.Waxay qaadataa dhowr daqiiqo in la barto sida loo isticmaalo nidaamka. Waxaa jira sanduuq kontorool oo gooni ah oo leh laba koontarool: mid u wareegga bidix iyo mid u wareegga midig. Iyada oo la xakameynayo joystick, booska xamuulka ayaa noqon kara meeleyn ku habboon.
Doorashadaadu waxay leedahay saamayn weyn oo ku aaddan wax -soo -saarka dekeddaada. Tani waa sababta aan u leenahay xeerkeena dahabka ah: waligaa ha ka tanaasulin tayada & tikniyoolajiyadda cusub ee astaamaha gaarka ah.
Kantaroolka fog ee wireless -ka
Maareeyaha walxaha hidde -sidaha taayir1
Fidiyaha telescopic ee korontada
Qabashada clamshell elektro-hydraulic
GBM waa soosaarayaasha hormuudka u ah soo dejinta iyo soo dejinta mashiinnada, ku takhasusay mashiinnada dekedda, mashiinnada birta, sida: Qabsashada, Hopper, fidiyaha Weelka, Clamps, Crane Deck iwm , Wiishka dushiisa, iwm. Marka laga reebo baaxadda badeecadda ee caadiga ah, GBM waxay kaloo horumarisaa xalal u gaar ah xaaladaha gaarka ah iyo baahiyaha macmiilka ee maareynta maaddada. FAA'IIDADA NOOCYADA 1. Naqshad isku -dhafan 2. Raad yar -yar 3. Helitaan fudud oo loogu talagalay dayactirka xilliyeed, adeegga iyo dayactirka
Waxaa jira hal eray oo qabta geeddi -socodkeenna, laga bilaabo hindise ilaa hawlgal: shaqsi. Tallaabadayada ugu horreysa waa falanqeyn dhammaystiran oo ku saabsan baahiyahaaga iyo rabitaankaaga. Markaa waxaan isku dayi doonnaa sida ugu fiican si aan kuu siino xalka.
Ka sokow alaabooyinka wax -qabadka sare leh, GBM waxay bixisaa 24 bilood oo la isku halleyn karo oo ah adeeg caalami ah oo dayactir bilaash ah & Injineero diyaar u ah inay ka shaqeeyaan dibadda.Taasi micnaheedu waa inaan kuu oggolaanno inaad si ammaan ah oo hufan u shaqeyso - xitaa marka ay jiraan xaalado aad u daran.
wiishka sagxadda, Wiishka Dheelitirka, wiishka Haydarooliga, wiish kalluumeysi, candhuufta telescopic wiishka boom, wiishka badda, Dhammaan Alaabta